स्टिभ जब्सको बीएमडब्ल्यु जेड ८ लिलाम गरिने
टेक कम्पनी एप्पलका दिवंगत संस्थापन स्टिभ जब्सको कार बिएमडब्ल्यु जेड ८ अमेरिकामा लिलाम गरिने भएको छ । सो कार ४ लाख डलर अर्थात करिब ४ करोड रुपैयाँमा बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । लिलामीको आयोजक सोदबेका अनुसार सो कार स्टिभ जब्सले मोडिफाई गरेर चलाएका थिए...
घर भित्रै जोडिएको हाइवे
जापानको ओसाकामा रहेको गेट टावर भवन अन्य भवन भन्दा फरक छ । यो एक उत्सुकतापुर्वक हेर्न लायक भवन हो । १६ तले सो भवनको पाचौ छैठौ र सातौ तल्लाबाट एक उच्च गतिको हाइवे रहेको छ । भवनको चौथो तल्लाबाट सिधै आठौ तल्लामा जाने लिफ्टको व्यवस्था गरिएको छ । यो आफैमा...
रोनाल्डोले किने बुगाटी काइरान सुपरकार (भिडियोसहित)
लक्जरी कारका सौखिन फुटबल खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बुगाटी काइरान सुपरकार खरिद गरेका छन् । यो सुपरकारको मूल्य ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ । रोनाल्डोले आफ्नो इन्स्टाग्राम पेजमा यो कारको भिडियो समेत सेयर गरेका छन् । New animal in the building Bu...
अटोमोबाइल सम्वन्धी कति चासो राख्नुहुन्छ ? सवारी साधनका यावत् विषयमा कति जिज्ञासा राख्नुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईले धेरै कष्ट उठाउनु पर्दैन । छिमेकी भारतसम्मको यात्रा तय गरे पुग्छ । किनभने भारतको अहमदाबादमा नै त्यस्तो जिज्ञासा शान्त पार्न सकिन्छ,...
बर्थडे ब्वाई सोनु निगमको कार
भारतका प्रसिद्ध प्लेब्याक सिंगर सोनु निगमको आज जुलाई ३० का दिन जन्म दिन हो । गायनका साथ सोनु निगम लक्जरी कारका सौखिन पनि हुन् । उनीसँग लक्जरी कार रेन्ज रोभर भोग छ । सोनु निगमको यो कार डिजेल इन्जिन अप्सनमा उपलब्ध छ । यो ८–स्पिड अटोमेटिक ट्रान्स...
के तपाईंले कुनै महिलाले गोरुसँग बिहे गरेको सुन्नुभएको छ ? यस्तो विचित्र सुन्ने कुरै भएन । तर हालै एक ७४ वर्षकी महिलाले एउटा गोरुसँग बिहे गरेर सबैलाई अचम्ममा पारिन् । उनी अहिले दिनहुँ आफुले बिहे गरेको त्यो गाईको बाच्छोको हेरचाहमा लागिरहेकी छिन् । उसला...
जन्म दिनमा रणवीरको रोमान्टिक ड्राइभ
आफ्नो जन्म दिनमा बलिउड नायक रणवीर सिंह प्रेमिका दीपिका पादुकोणका साथ रोमान्टिक ड्राइभमा निस्केका छन् । उनीहरु आफ्नो फ्यान्सी कार एस्टन मार्टिनमा ड्राइभिङ गर्दै निस्केको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । रणवीरले अहिले आफ्नो ३२औं जन्म दिन मनाए...
मोटरसाइकल यात्रीको पुस्तक
भारतमा हालै एक मोटरसाइकल यात्रीले पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । उक्त पुस्तकको नाम ‘ड्रिम टु राइड अराउन्ड द वल्र्ड’ राखिएको छ । मान्छेको सपना पनि अचम्मको हुन्छ । कतिपय मान्छेहरु त्यो अचम्मको सपनालाई विपनामा परिणत गर्न सफल हुन्छन् । यो कुरा केदारन...
चीनले ल्यायो स्मार्टबस, २०१८ देखि बजारमा आउने
चीनले हालै रेल जस्तै बस सार्वजनिक गरेको छ । यसको नाम स्मार्टबस राखिएको छ । यो बस ३० मिटर लामो छ । यसमा ३ सय जनासम्म बस्न मिल्छ । यो बसका तीनवटा डिब्बा छन् । रेलजस्तै भए पनि यसका लागि कुनै रेलवे लाइन चाहिँदैन । यसमा चालक पनि हुँदैनन् । बरु सामा...
जापानले ल्यायो क्रुज ट्रेन, सेवा लिन हजारौको बुकिङ
जापानमा सुपर डिलक्स क्रुज ट्रेनको सेवा प्रारम्भ भएको छ । हजारौ डलर तिरेर यो रेलको सेवा लिनका लागि मानिसहरु पहिले देखि नै बुक गराइरहेका छन् । यो रेलले आर्ट डेको अर्थात आधुनिक कलाको सुरुवात समयको सम्झना गराउने छ । ट्वीलाइड एक्सप्रेस मिजुकाजीले यो सेवाक...
गाडीमा खुट्टा फैलाएर नबस्नुस् है
स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा सार्वजनिक गाडीमा पुरुष यात्रुले खुट्टा फैलाएर बस्न नपाउने नियम लागु भएको छ । स्पनेको यातायात विभागले सार्वजनिक गाडीको सिटमा खुट्टा फैलाएर बस्ने पुरुष यात्रु विरुद्ध अभियान नै चलाएको छ । म्याड्रिडमा सार्वजनिक गाडी सञ...
आउँदै छ फ्लाइङ बाइक – फ्लायर (भिडियो सहित)
यसलाई फ्लाइङ बाइक भन्न सकिन्छ । हेर्दा हेलिकप्टर जस्तो पनि छ । किटी हक कम्पनीले गाडीको प्रोटोटाइप विकास गरेको छ । यो हेलिकोप्टर, बाइक वा के हो ? खास भन्न सकिदैन । यो सबैको मिश्रण हो । यसलाई फ्लायर भनिएको छ । किटी हकका अनुसार यो २ सय २० पाउन्ड...
विजय माल्याको कार कलेक्सन
विजय माल्या अहिले धेरै चर्चामा छन् । बैंकको ऋण नतिरको आरोपमा उनलाई लन्डनमा गिरफ्तार गरियो । उनको लग्जरी लाइफस्टाइलको बारेमा पनि अहिले धेरै चर्चा भइरहेको छ । व्यापारी हुनुका साथै विजय माल्या प्रसिद्ध कार लभर पनि हुन् । यद्यपि गत जनवरी ३० मा ऋण...
दुलहीलाई प्रहरीको एस्कर्टिङ
जर्मनीको कोलोनमा प्रदर्शन गरिरहेका दक्षिणपन्थी र बामपन्थी पार्टीका बीच झडप भयो । सो प्रदर्शनमा करिब ५० हजार ब्यक्ति सामेल थिए । यो अवस्थामा आफ्नो विवाहका लागि चर्च गइरहेकी महिला समेत फस्न पुगिन् । वैवाहिक पोशाक पहिरेकी र हातमा फुल लिएकी महिलातर्फ दुई...